Hlangani ndawonye ukunqamula ubunzima
NgoFebhuwari 2019, uMnu Lin Yuanzhong, owayekade eyisisebenzi seChangheng Company, ngeshwa wahlaselwa ngumdlavuza wamaphaphu. Umholi wenkampani wazisa bonke abasebenzi abaseqenjini lenkampani iWeChat futhi wanikela ngokushesha okukhulu. Abasebenzi nabo babambe iqhaza kulo mnikelo futhi ...
INKAMPANI yobumbano yanikezwa isihloko sebhizinisi elikhokha intela eShanghai. Lokhu ukuqinisekiswa kobuchwepheshe be-CORBITION, kepha futhi nokubuyela kwabo bonke abasebenzi be-CORBITION emphakathini. Esikhathini esedlule se-8th China (Shanghai) International Technology Import and Export Fair, imikhiqizo yethu ...
I-CORBITION Party Yonyaka Omusha
KuMkhosi Wentwasahlobo ka-2020, ukuze kuliwe ne-COVID-2019, i-CORBITION Company ithole iziyalezo kuhulumeni ofanele ukuthi ahlele ukuqala kabusha komkhiqizo ngaphambi kwesikhathi. Lapho kungekho zinsizakusebenza kanye nabasebenzi, uMnu.Ge Bingda, usihlalo wenkampani, usebenze usuku ...